UThandi Modise (owazalwa ngomhlaka-25 Disemba 1959, eVryburg) ungusopolitiki waseNingizimu Afrika, futhi wayeyigagu elalilwa ne-Anti-Apartheid. Njengamanje usebenza njengoSomlomo Wephalamende Likazwelonke laseNingizimu Afrika .Usebenze njengoSihlalo woMkhandlu Kazwelonke Wezifundazwe kusuka ngowezi-2014 kuya kowezi-2019.
Washiya iNingizimu Afrika ngo-1976 wajoyina i- African National Congress futhi wathola ukuqeqeshwa e-Angola. Ubuyele eNingizimu Afrika ngo-1978 njengomsebenzi woMkhonto weSizwe . Waboshwa futhi waboshwa ngo-1979, waba ngowesifazane wokuqala eNingizimu Afrika ukuboshwa ngenxa yemisebenzi ye-MK.
Usebenze njengoNdunankulu waseNyakatho Ntshonalanga kusukela ngomhlaka 19 Novemba 2010 kuya kumhla zingama-21 Meyi 2014, lapho esikhundleni sakhe kwathathwa uSupra Mahumapelo, naye owayevela ku-ANC, ngemuva kokhetho luka-2014 .
Ngo-2017, wabanjwa ethatha imali yesibonelelo sokuhamba engaphezulu kuka-R125 000, ayengenalungelo lokuyithola njengosihlalo woMkhandlu Kazwelonke Wezifundazwe. Wacelwa ukuba akhokhele lesi sibonelelo esikhathini esiyiminyaka emithathu, kodwa waphikisana nalo myalelo futhi akukaziwa ukuthi wagcina eyikhokhile yini leyo mali.
Amacala enkohlakalo yezilwane[hlela | Hlela umthombo]
NgoJulayi 2014, i- NSPCA yathola inqwaba yezilwane ezifile, ezihlanganisa izinkukhu, izingulube, izimbuzi kanye namahansi, epulazini likaModise eModderfontein, ngaphandle kwasePotchefstroom esifundazweni saseNyakatho Ntshonalanga. Bekusobala ukuthi izilwane sezihambe ngaphandle kokudla namanzi isikhathi esingaphezu kwesonto, kanti izingulube ezingama-85 ezisele epulazini sezisebenzise ukudla izingulube ezingama-58 ezifile.Abekho abasebenzi ababekhona kule ndawo. Amaphoyisa aseNorth West akuqinisekisile ngomhlaka 7 Julayi ukuthi uzobhekana namacala okuhlukumeza izilwane ngokwephula umthetho i-Animal Protection Act. Uphendule kulezi zimangalo wathi "ufunda" indlela yokulima, nokuthi waqoka umphathi wepulazi, kepha wayeka imisebenzi yakhe ukuze abhekane nodaba lomndeni. Cishe ezinyangeni ezine kamuva,kwabikwa ukuthi isimo epulazini sase singcono, ukuthi izinkomo zikaModise zazithola ukudla okwanele futhi "zisesimweni esamukelekayo".
I-NSPCA ne- AfriForum bavulele uModise icala lokuhlukunyezwa kwezilwane, okusamele liqulwe.
Retrieved from "https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Thandi_Modise&oldid=88767"
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-29 uNtulikazi 2021, nge-20:02.